Dzimba nemisha ine dzimba, yekurenda uye kutengesa kuchitsuwa cheIbiza.
Villas muIbiza | Dzimba nemisha ine dzimba dzekuhaya nekutengesa pachitsuwa cheIbiza.
Rarama chiitiko chakakwana cheIbiza
Rarama zvakakwana Ibiza Zvakaitika
Tsvaga chidimbu chako cheparadhiso pakati pedu sarudzo yemisha muIbiza
icon / kaviri-chevron-pasiYakasikwa neSketch.
Tarisa uone yedu yakanaka kuunganidzwa kweVillas rendi
Villas dzimba muIbiza
Isu takatsaurirwa kuwana yako yakanaka yezororo villa muIbiza.
Sarudza pakati pedu sarudzo yemahombekombe dzimba dzine dziva kana zvakajairika fincas nemweya, imwe neimwe yemapurazi mune yedu portfolio yakanyatsosarudzwa uye inopa ese marudzi enyaradzo.
Yakanaka yazvino uye yakasarudzika villa muIbiza
Ino imba yekurara mishanu ye550m2 yakavakirwa mukati memakomo eIbiza. Iyo yakatenderedza mhepo inopa kudzikama kugadzikana nepfungwa yechinyakare yechisikigo uye inopa iyo yega ...
Wedzera Favorites Bvisa kubva kuFavorites
Yakanaka finca yekurenda muIbiza ine maonero egungwa
Iyi finca inonakidza yekurenda muIbiza iri kuchamhembe kwechitsuwa maminetsi mashoma kubva kumusha wakakurumbira weSan Juan. Iyo finca izera ramakore mazana matatu uye yakadzoreredzwa muMoori ...
Imba yakanaka mumoyo weIbiza, nzvimbo yerunyararo
Imba yakanaka muIbiza, nzvimbo ine rugare, yakashongedzwa zvakanaka uye yakavakwa nguva pfupi yadarika, ine 300m² yakavakwa, yakashongedzerwa zvakakwana neyakagadziriswa mhepo. Iko 4 km kubva kuSanta Gertrudis uye 10 km kubva ...
Imba yakanaka yemazuva ano muIbiza padyo nekumaodzanyemba kweChitsuwa
Iyi imba yakanaka yemazuva ano inoshandisa mwenje wechisikigo kubva kumahwindo mahombe ayo anopa kunzwa kwenzvimbo uye inosimbisa mhando yemagadzirirwo ayo. Imba iri munzvimbo ine runyararo mumoyo we ...
Kana kutarisa zvizere kuunganidzwa
Ibiza, chitsuwa chitsvuku
Mahombekombe akanaka ane turquoise mvura uye mawere mawere, anoyevedza misha, inonaka gastronomy uye mamwe anozivikanwa makirabhu munyika. Ibiza izvi zvese izvi uye nezvimwe zvakawanda. Itsika yetsika inokonzeresa kubva mukuchinjana kwetsika dzakasiyana dzinoumba nhoroondo yayo, Punic, Roma, Phoenician… yashandura chitsuwa chidiki ichi cheMediterranean kuti chive chirevo chenyika.
Saka nei uchifarira Ibiza chete munguva yezhizha? Kunyangwe iri Krisimasi, Svondo reIsita kana chero imwe nguva yegore, mhuri dzinogona kunakidzwa nemitambo yakawanda yegungwa nekuda kwemamiriro ekunze akapfava uye kuwanda kwemazuva ane zuva.
Kana iwe uchida kurairwa kwekugara, ingo zadza fomu kana kufona.
Tichave tichifara kukubatsira iwe kuti uwane iyo yakakwana villa uye uwane iyo chaiyo Ibiza.
Nyorera kune zvedu Newsletter
Kunyangwe ichizivikanwa nehusiku hwehusiku uye nenzvimbo dzine fashoni, Ibiza yakanyanya kudarika mahombekombe uye makirabhu. Chitsuwa ichi chinopa mashiripiti uye anoshamisa nzvimbo, isina kusvibiswa nharaunda uye hukuru hupenyu hwehupenyu kungori maawa mashoma kutiza kubva chero nzvimbo muEurope.
Ibiza inzvimbo yakakwana yekuva neimba.
Wona edu ezvinyorwa zvezvivakwa zvekutengesa, mafurati, uye mapurojekiti ekuvandudza ivhu muIbiza
Nyika inotengeswa muIbiza neprojekti
Kubvunza mutengo 550.000 €
Imba yepamusoro inodhira Ibiza Botafoch
Kubvunza mutengo 1.200.000 €
Penthouse inotengeswa muIbiza - Marina Botafoch
Kubvunza mutengo 1.590.000 €
Villa inotengeswa muIbiza, kuchamhembe kwechitsuwa
Kubvunza mutengo 1.399.000 €
Kurambidzwa pachitsuwa cheIbiza nekuda kwecovid-19 denda.
Kwidziridzo 17 Mbudzi 2021 Parizvino hurongwa hwemutemo muSpain hausi kumisa chisungo chekudzivirira uye kuisa kuvharirwa kune vasina kubayiwa, sezvakatoitwa.
Mamiriro ezvinhu eCovid 19 - Coronavirus muIbiza, Balearic Islands, Spain
16 Nov 2021 Parizvino muIbiza neFormentera mune vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu
Kuvhurwa kuri kuitika kwemakirabhu ehusiku muIbiza.
Zvirambidzo muIbiza neFormentera nekuda kweiyo coronavirus covid-19 zvakasimudzwa se
Smart Working muIbiza
Kubva kutanga kwechirwere checoronavirus covid-19, vanhu vazhinji vava kujaira
Mazororo ejacht muIbiza
Iyo superyacht charter muBalearic archipelago ndiwo mukana wakanakisa wekuti uwane mamwe
16 Mbudzi 2021 Parizvino kuIbiza neFormentera kune vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vane hutachiona hwecovid-266. Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yezviitiko zvinoshanda zvehutachiona
Izvo zvinorambidzwa muIbiza neFormentera nekuda kwecoronavirus covid-19 inosimudzwa sezvo chirwere chepachirwere muBalearic Islands chiri nani. Ibiza makirabhu anokwanisa kuvhura
Kubva kutanga kwechirwere checoronavirus covid-19, vanhu vazhinji vari kujaira kushanda kubva kumba uye nepo Kufambidzana kwevanhu kuchiri kushanda uye nyika zhinji dzave
Iyo superyacht charter muBalearic archipelago ndiwo mukana wakanakisa wekuona dzimwe dzakanakisa nzvimbo mugungwa reMediterranean. Uye kudzikisira mota yechikepe
Yakareba rendi muIbiza
Nepo mazana evaEuropean vachiratidzira mumigwagwa vachipesana nehurumende dzavo kutongerwa kusungwa, izvo zvakare zvakavharira mudzimba dzavo nemukana wekuenda
Yakasarudzika Luxury Villa MuIbiza Yakatarisana neGungwa
Anoshamisa Minimalist Style Villa MuIbiza
Yakanaka Yemazuvano Uye Stylish Villa MuIbiza
Yemazuva Ano Villa MuIbiza
Hapana chinokunda kwedu chaiko kwemuno ruzivo rweIbiza.
Tishevedze isu kuti tibatsirwe, akanakisa mareti uye concierge sevhisi.
Villas muIbiza | Dzimba nemisha ine dzimba, yekurenda uye kutengesa kuchitsuwa cheIbiza.
Kusarudzwa kwezvivakwa zvekurenda
Yakazara muunganidzwa >>
Imba yakanaka muIbiza ine maonero egungwa kubva kukona yega yeimba
Kubva 1.200 € / zuva
Inoshamisa yakazara yakazara fenzi villa muIbiza inoyevedza maonero egungwa
Yakanaka yakavharika nzvimbo yekubhadhara yeIbiza ine yakanakisa maonero
Kubva 2.000 € / zuva
Blog, Magazini, matipi eIbiza
Yakazara Magazini >>
Dambudziko raonekwa muFomu rinotevera. Kuitumira kunogona kukonzera kukanganisa. Ndokumbira ubate saiti maneja.
Ndinoda kugadzira Ndiri kuda kutenga chivakwa Ndinoda ruzivo
Villas Apartments Nyika